လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွယ်ယန်ဘွန်အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများတွေ့ဆုံပွဲ မိုးညှင်းမြိ?? - Yangon Media Group
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွယ်ယန်ဘွန်အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများတွေ့ဆုံပွဲ မိုးညှင်းမြိ??
မိုးညှင်း၊ မတ် ၂၉- ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့ လွယ်ယန်ဘွန် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်များတွေ့ဆုံပွဲကို မတ် ၂၉ရက် တွင် မိုးညှင်းမြို့ အောင်သပြေရပ်ကွက် ရှိ စိန်ပက်ထရိတ်ကျောင်း၌ ကျင်းပခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင် အမျိုး သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်း ဆွေနိုင်နှင့် ပါတီဝင်များ၊ မြို့နယ် စိုက် ပျိုးရေးသုတေသနအရာရှိ ဦးမြင့် သောင်း၊ လွယ်ယန်ဘွန်အဖွဲ့မှ ဖိတ် ကြားထားသော အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်း ၁ဝဖွဲ့ ကျော်တို့ ပါဝင်တွေ့ ဆုံကြကြောင်း ဦးဆောင်ကျင်းပ သည့်အဖွဲ့မှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးလရိန်ထံမှ သိရသည်။
”လွယ်ယန်ဘွန် လူထုအခြေပြု အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုပ်ဆောင် ချက်အနေနဲ့ ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ လူမျိုးဘာသာမရွေး အခက်အခဲရှိသူ များကို ငွေကြေးအရ ကူညီပေးခြင်း၊ မြေယာမရှိ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ဆောင် ချင်သူများကို မြေလွတ်မြေရိုင်းလျှောက် ထားပေးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး အတွက် နည်းပေးကူညီခြင်း၊ အမျိုးသမီး များ အလုပ်လက်မဲ့မဖြစ်စေရန် အလုပ် အကိုင်ရရှိစေရန် လမ်းပြကူညီပေးခြင်း၊ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သော ဈေးသည်များ အတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းများ ကို အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ လုပ်ဆောင် ပေးလျက်ရှိပြီး သက်သာသောနှုန်း ထားဖြင့် ငွေစုငွေချေးအသင်းအဖွဲ့အ ဖြစ် နည်းစနစ်ကျအောင် သင်ကြား ပေးလျက်ရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနများ နှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရန်၊ လိုအပ်ပါက ¤င်းတို့မှ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပေးလျက်ရှိ ကြောင်း ¤င်းကပြောကြားသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင် တက်ရောက် လာသူများမှ မိမိတို့ကျေးရွာဒေသတွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော အခက်အခဲများ ကို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ရာ အမျိုးသားလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းဆွေနိုင်မှ နှုတ်ဖြင့် ပြောဆိုသကဲ့သို့ စာဖြင့်ရေး သား၍ ¤င်းတို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များထံသို့ အရောက်ပို့ဆောင် တိုင်ကြားကြရန် လမ်းညွှန်ပြောကြားခဲ့ သည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ အမျိုးသားလွှတ် တော်အပါအဝင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများ၊ CSO များနှင့် ဖိတ် ကြားထားသူ ဦးရေ ၁၂ဝ ခန့် တက် ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဆစ်ဒနီလေဆိပ်မှ ပျံသန်းမှုထိန်းချုပ်ရေးတာဝါတွင် မီးခိုးထွက်လာသဖြင့် လေကြောင်းခရီးစဉ်များ ?
အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးအဖြစ် ဦးမင်းသူကို ခန့်အပ်ရန် လွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက် ယူ